Wararka - Astaamaha villa birta fudud iyo dhismaha nidaamka
Qaabdhismeedka aluminium-zinc ee aluminium-zinc saxan bir ah wuxuu ka kooban yahay 55% aluminium, 43.4% zinc iyo 1.6% silicon oo lagu adkeeyay 600℃. Qaab dhismeedka oo dhami wuxuu ka kooban yahay aluminium-bir-silica-zinc, sameysmaya afar curiye cufan oo cufan, sidaasna ku sameysmaya lakab adag oo xoog leh oo wax ku ool ah si looga hortago waxyaabaha sababa daxalka inay galaan.
Waxyaabaha birta fudud
1. Iska caabinta daxalka
Iska caabbinta daxalka ee "55% aluminium-zinc gariiradda" waxay ka timaaddaa ilaalinta carqaladda ee aluminium iyo ilaalinta allabariga ee zinc.Marka zinc loo huro si loo ilaaliyo geesaha la gooyey, xagashada, iyo xagashada xoqida, aluminiumku wuxuu sameysmaa lakab xabagta oo aan milmi karin Qalabka aluminium-zinc ee birta ah ee aluminium-zinc ayaa lagu soo rogay tijaabooyin banaanka dibadda ah in ka badan 20 sano iyada oo lagu hoos jiro xaalado kala duwan oo hawo ah, waxaana la caddeeyay in 55% aluminium-zinc gariiradda birta daawaha ah ay leeyihiin ka hortag goynta gees ka fiican tan galvanized iyo 5% aluminium-zinc daawaha birta aluminium.
2. Iska caabin kuleylka:
Cadaadiska kuleylka ee 55% aluminium-zinc saxan birta ah wuxuu ka fiican yahay kan saxanka birta ah, iyo u adkeysiga qandhada sare ee aluminiumka aluminiumku waa mid la mid ah. Alminized zinc plate alloy steel waxaa loo isticmaali karaa jawiga heerkulka sare ilaa 315 darajooyinka.
Taarikada birta ah ee aluminium-zinc ah ee 55% waxay leedahay milicsiga sare, taas oo ka dhigaysa carqalad u adkaysata kuleylka. Xaashiyaha zinc ee la iftiimiyay waxay leeyihiin ku dhowaad laba laab ka tarjumidda kuleylka ee xaashiyaha galvanized, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa inay yihiin saqafyada iyo darbiyada bilaa rinji si loo badbaadiyo tamarta.
4. Rinjiga guryaha:
Sababta oo ah isku dhejiska wanaagsan ee u dhexeeya lakabka zinc iyo rinjiga saxanka birta ah ee aluminized, waa la rinjiyeyn karaa iyada oo aan la sii dhigin iyo daaweynta cimilada marka loo isticmaalo calaamadeyn ujeedo guud ah.
Qaab dhismeedka nidaamka villa fududNidaamka qaabdhismeedka darbiga birta ah, oo ah nalka birta iyo tiirarka feeraha birta ah iyo si waafaqsan qaab dhismeedka dayactirka ee xoogga guud, tilmaamayaasha waxqabadka jireed waa kuwo aad u fiican, muddada dhismuhu waa gaaban tahay, saamaynta kuleylka wanaagsan, waa nooc cusub oo keydinta tamarta cagaaran iyo nidaamka qaab dhismeedka dhismaha ilaalinta deegaanka.
1. Nidaamka aasaasiga ah
Is-miisaanka guriga qaabdhismeedka birta fudud waa iftiin, taas oo kaliya qiyaastii 1/5 ee dhismaha qaab dhismeedka shubka bulukeetiga iyo 1/8 ee dhismaha qaab dhismeedka shubka la xoojiyay, sidaa darteed waxay si weyn u yareyn kartaa qiimaha dhismaha aasaasiga ah. Aasaaska guriga qaab-dhismeedka birta fudud guud ahaan wuxuu qaataa aasaaska xargaha.
(1) Qaabdhismeedka birta fudud ee miisaanka fudud, wuxuu si weyn u yareyn karaa qiimaha injineernimada aasaasiga ah;
Naqshadeynta qoyaan-caddeynta ee aasaaska ayaa si wax ku ool ah uga hortagi karta duulaanka qoyaanka iyo gaasaska waxyeellada leh;
(3)Habka isdaba-marinta ee macquul ah si loo hubiyo isku xirnaanta la isku halleyn karo ee aasaaska iyo jirka ugu weyn.
2. Nidaamka gidaarka
Nidaamka derbiga dibedda guud ahaan wuxuu u dhexeeyaa 120-200㎜, sababtoo ah darbigu waa fududahay oo khafiifsan yahay, aagga isticmaalka dhabta ah ee guriga qaab dhismeedka birta nuuraya wuxuu ku kordhayaa qiyaastii 10% -15% marka loo eego guriga caadiga ah, aagga isticmaalka gudaha wuxuu ku kordhayaa in ka badan 90% guriga caadiga ah, gudaha gudaha waxay noqon kartaa kala-goyn dabacsan.Pipeline-ka waxaa lagu hagaajin karaa darbiga, sagxadda iyo qaybaha saqafka godadka la xareeyay, qarintu way wanaagsan tahay, wayna ka qurux badan tahay.
(1)Darbiga waxaa ka buuxsamay suuf fiber fiber, kaas oo leh waxqabadka wanaagsan ee ilaalinta kuleylka, kuleylka kuleylka iyo dahaadhka codka;
(2) warqadda neefsashadu waa mid aan biyuhu karin oo neefsan kara, taas oo si wax ku ool ah u habeyn karta qoyaanka hawada ee gudaha ah, kuwa noolna ka dhigaysa kuwo raaxo leh, isla markaana si wax ku ool ah uga hortagga taranka caaryada gudaha derbiga;
Dhuumaha ayaa lagu aasay darbiga mana fadhiisanayaan meel bannaan oo gudaha ah.
3. Nidaamka dabaqa
Dabaqa wuxuu ka samaysan yahay xoog-galvanized kulul-galvanized nooca C iyo xubnaha bir nalka fudud. Alwaaxyada sagxadda waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan habka caadiga ah iyo feeraha kala-dheellitirka ee loo siman yahay. Alwaaxyada sagxadda waxaa lagu daboolay taarikada qaabdhismeedka kuwaas oo si adag u diidaya qoyaanka iyo xinjirowga jirka, oo sameeya nidaam dabaqa dhul gariirka oo xoog leh.
(1) Saxanka qaabdhismeedka iyo birta birta qaab dhismeedka isku dhafan, xoog leh oo xasilloon;
(2) dhammaan noocyada biyaha iyo dhuumaha korontada waxaa lagu qariyey dhismaha sagxadda mana fadhiisan doonaan dhererka dhismaha;
(3) Suufka fiber galaasku wuxuu ka buuxsamay dhexdhexaadiye, iyo saameynta ilaalinta kuleylka iyo kuleylka kuleylka, nuugista codka iyo dahaadhka codka waa mid cajiib ah.
4. Nidaamka saqafka
Qalabka saqafku wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo bir bir ah. Guud ahaan, waxaa jira goos goos goos ah iyo goos goos T-qaabeeya, kuwaas oo si fudud oo rogrogmi kara ku guuleysan kara noocyo kala duwan oo qaabeynta saqafka adag. Guud ahaan, saqafku wuxuu ka samaysan yahay jiingado midabbo kala duwan leh, kuwaas oo leh waxqabad wanaagsan oo biyo-mareen ah isla markaana muujinaya quruxda iyo tayada.
(1) Saqafka isku dhafan ayaa leh shaqooyinka caddaynta roobka, iska caabbinta cimilada, kuleylka kuleylka, iwm, kuwaas oo ku guuleysan kara noocyo badan oo hodan ah;
Naqshadaynta wareegga hawo qaadashada, marwalba hawo hawo hawo leh.
5. Qaybaha dhismaha
Dhammaan qaybaha qaab-dhismeedku waxay ka samaysan yihiin bir xoog leh oo bir ah oo galvanized ah si loo hubiyo nolosha adeegga ee guriga. Dhammaan qaybaha qaabdhismeedka ah waxaa qabow ku riixaya khadka isku xidhka mashiinnada saxsan ee warshadda, saxsanaanta cabbirkeeduna waa mitir mitir, oo aan la barbar dhigi karin dhismooyinka kale.